Maninona aho no mankahala ny kaonty voamarina | Martech Zone
Alatsinainy, 3 Jona, 2013 Alatsinainy, 3 Jona, 2013 Douglas Karr
Ry namana tsara, Jason Falls, nanana fanavaozana Facebook nahafinaritra izay nanala baraka ireo olona media sosialy nisoratra anarana tao amin'ny Facebook ho an'ny a kaonty voamarina. Tsy azo antoka ho an'ny asa ny fanavaozam-baovao azy, saingy niteraka savorovoro tamin'ny haino aman-jery sosialy izany. Ny fe-potoam-piasany ho an'ireo olona nisoratra anarana dia nanomboka tamin'ny "d" ary nifarana tamin'ny "kitapo", hehe.
A kaonty voamarina dia marika marika maivana kely na manga kely hita maso eo amin'ny mombamomba ilay olona ao amin'ny Twitter na Facebook. Ny fanamarinana dia midika fotsiny fa naka fotoana ny Twitter na Facebook mba hahazoana antoka fa ny olona ao ambadiky ny kaonty dia ilay olona heverinao fa misy azy. Amin'ny sehatra ambonimbony dia toa hevitra tsara izany… tsy tianay ny hamitaka ny olona.
Mankahala aho kaonty voamarina noho ny antony roa:
Tsy ny rehetra no afaka mangataka - Scott Monty apetraho, ny 1% dia manana fidirana amin'ny kaonty voamarina. Fa maninona tsy ny rehetra? Rehefa nanamarina ny orinasako niaraka tamin'ny Google+ aho dia afaka nanao izany haingana ary tsy nisy olana. Efa ary ary misokatra ho an'ny rehetra izany.
Midika bebe kokoa izany - hita maso amin'ny Internet ny zava-drehetra. Na bara maitso ho an'ny tranokala azo antoka, a mpankafy na mpanisa isa, pejy wikipedia, na badge iray avy amin'ny tranokala premium, ny famantarana ny fitaomana sy fitokisana rehetra amin'ny tranonkala raharaha ary misy fiatraikany amin'ny fihetsiky ny olona an-tserasera.
Satria misy manana ary tsy manana kaonty voamarina, demokrasia maka seza aoriana. Ankehitriny ny olona sasany dia hanafaingana ny fitomboany - tsy noho ny sanda omen'izy ireo ny tamba-jotra - fa satria manana marika kely maitso na manga izy ireo. Manamarina izany ny marika fanamarinana "Manan-danja kokoa noho ny olon-drehetra aho" ary, vokatr'izany, dia hanafaingana ny mpankafy sy hanaraka.
Raha tsy mino ahy ianao dia tsy azonao ny ego amin'ity orinasa ity. Mikorontana ny olona hahazoana ireo kaonty voamarina ireo… na dia tsy misy filazana aza fa misy mampiasa tsy araka ny tokony ho izy ny mombamomba azy. Mikorontana izy ireo hahazoana azy ireo satria fantatr'izy ireo fa ny takela-bato maitso na manga kely dia volamena. Izy io dia hitarika ho amin'ny fanararaotana lehibe kokoa, miteny sy manoratra bebe kokoa, ary - amin'ny farany - orinasa bebe kokoa. Tsy noho ny fahamendrehanao manokana, fa noho ny mari-pamantarana hita maso.
Sokafy amin'izay maniry izany ny fizotran'ny fanamarinana. Tahaka ny fangatahantsika mari-pankasitrahana SSL na orinasa Google+, asio fomba fiasa izay ahafahan'ny tsirairay manamarina ny mombamomba azy. Ataovy ho an'ny rehetra, na aza atao mihitsy.